Jowhar Oo Ka Taagan Cabsi Xoog Leh - Awdinle Online
Jowhar Oo Ka Taagan Cabsi Xoog Leh
April 19, 2020 (Awdinle Online) –Dadka ku nool xaafada Horseed ee magaalada Jowhar ayaa cabsida ugu badan ka muujinaya in uu ku fataho wabiga Shabeelle, in kastoo si guud cabsida laga qabo fatahaada wabiga ay ka jirto guud ahaan deegaanada Hir-Shabeelle intooda uu webigu maro.
Saacadihii u dambeeyay Jowhar iyo magaalooyin kale oo uu wabigu maro waxaa ka da’ay roobka Guga, waxayna dadku bilaabeen in ay jawaano caro lagu shubay gidaar uga dhigaan biyaha wabiga, si fatahaadiisa ay uga badbaadaan.
Mas’uuliyiin uu ka mid ah yahay wasiir ku xigeenka wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hir-Shabeelle Maxamed Bashiir Daqare ayaa ka qeyb galay dadaalka ay dadka deegaanku uga gaagaamanayaan fatahada wabiga ee baqdinta laga qabo madaama uu curtay roobkii Guga.
Maxamed Bashiir wasiir ku xigeenka wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hir-Shabeelle ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qaado tallaabo deg deg ah, si looga badbaado khatarta ka dhalan karta hadii uu fatahaad sameeyo wabiga Shabeelle.
“Laga soo bilaabo Deefoow gobolka Hiiraan illaa degmada Balcad oo Shabeelaha Dhexe ah, waxaa ku dhex jira goobo laga cabsi qabo in uu karkaarada ka jabsado wabiga Shabeelle, waana 59-meyl, mana jiraan hey’ado u diyaarsan in ay wax ka qabtaan oo si deg deg ah uga jawaaba cabsida dadka deegaanka” ayuu yiri Maxamed Bashiir Daqare.
Deegaanada Hir-Shabeelle intooda uu wabigu maro, gaar ahaan xarunta gobolka Hiiraan ee Beledweyne ayaa lagu xasuustaa sameyntii uu ku yeeshay wabiga Shabeelle oo si daran ugu fatahay deyrtii lasoo dhaafay.
Previous articleYaa maal gelinaya Mashruuca Baxnaano ee Madaxweynaha daah-furay
Next articleHowlgal Ka Dhacay Sh/Hoose Oo Lagu Qabtay Madaxii Sakawaadka Al-Shabaab